သန်းရာနှင့်ချီ၊ သန်းထောင်ချီပင်ဖြစ်သောလူတို့သည် တစ်ခုတည်းသောအရာကို တောင်းလျှောက်နေကြသည်ဟု မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူတို့သည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို ပြည့်စုံစေရန် စကြဝဠာရှိအမြင့်ဆုံးအခွင့်အာဏာရှင်အား တောင်းလျှောက်နေကြသည်။ သို့တိုင် သူတို့တောင်းလျှောက်သည့်အရာမှာ အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို အတိအကျသိသူမရှိသလောက်ပင်။ ထိုသို့အမှန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော။ အမှန်တွင် ယင်းသည် နေ့တိုင်းဖြစ်နေသည့်အရာဖြစ်၏။ ဤလူအားလုံးတို့သည် အဘယ်အရာကို တောင်းလျှောက်နေကြသနည်း။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်လာရန် ဖြစ်သည်!
ယေရှုခရစ်ကို မိမိတို့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ယုံကြည်ပြီး မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ ခရစ်ယာန်များဟုဆိုသော အသင်းအဖွဲ့ ၃၇,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုကဆိုသည်။ ထိုအသင်းသားများမှာ သန်းနှစ်ထောင်ကျော်သည်။ သူတို့ထဲမှများစွာသောသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဘ သို့မဟုတ် သခင့်ဆုတောင်းချက်ဟုခေါ်လေ့ရှိသောဆုတောင်းချက်ကို တောင်းလျှောက်ကြသည်။ ဤဆုတောင်းချက်ကို သင်သိပါသလော။ ယေရှုသည် မိမိနောက်တော်လိုက်များကို ယင်းဆုတောင်းချက် သင်ပေးရာတွင် ဤသို့အစပြု၏– ‘ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော အကျွန်ုပ်တို့အဘ၊ ကိုယ်တော်၏နာမတော်အား ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော။ အလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသော။’—မဿဲ ၆:၉၊ ၁၀။
ရာစုနှစ်နှင့်ချီကာ ယခုအချိန်အထိ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သူတို့သည် ချာ့ခ်ျများတွင် ထိုဆုတောင်းချက်ကို လေးလေးစားစားဖြင့် အထပ်ထပ်ရွတ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ယင်းဆုတောင်းချက်ကို မိသားစုလိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အခွင့်သာသောအချိန်နှင့် အခွင့်မသာသောအချိန်တို့တွင် အလွတ်ရွတ်ဆိုကြ၏။ ထိုစကားကို နှလုံးပါပါ၊ ခံစားချက်အပြည့်ဖြင့်ပင် သူတို့ရွတ်ဆိုကြ၏။ များစွာသောအခြားသူတို့သည် ယင်းဆုတောင်းချက်ကို အလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ရန် သင်ယူခဲ့ကြပြီး ယင်းစကားလုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်ကို မစဉ်းစားဘဲ သို့မဟုတ် မသိဘဲလျက် ရွတ်ဆိုကြသည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်လာရန် မျှော်လင့်ပြီး ဆုတောင်းကြသူတို့သည် ခရစ်ယာန်အမည်ခံအသင်းသားများသာမဟုတ်ပါ။
ဂျူးလူမျိုးတို့၏ယုံကြည်ချက်ဆိုင်ရာ လူသိများသောဆုတောင်းချက်တစ်ခုမှာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူ၏ ကာဒစ်ဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းဆုတောင်းချက်သည် သေခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း ဆွေမျိုးရင်းချာဆုံးပါး၍ ဝမ်းနည်းပူဆွေးချိန်တို့တွင် ယင်းကို မြွက်ဆိုလေ့ရှိသည်။ ဆုတောင်းသူက ဤသို့ပြော၏– “ကိုယ်တော် [ဘုရားသခင်] သည် ကိုယ်တော့်နိုင်ငံတော်ကို သင့်သက်တမ်းတွင် . . . အလျင်အမြန်ပင် တည်ထောင်ပါစေ။” * နောက်ရှေးဟောင်းတရားဇရပ်ဆုတောင်း ချက်တစ်ခုက ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးနွယ်မှ မေရှိယ၏နိုင်ငံတော်ကို မျှော်လင့်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ခရစ်ယာန်မဟုတ်သူတို့မှ အခြားသူတို့ပင် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အယူအဆမှာ နှစ်လို့ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အိန္ဒိယ တိုင်းမ်စ်အရ ဟိန္ဒူ၊ မွတ်စလင်နှင့် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်များပါ ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အချက်များကို စိတ်ဝင်စားသော ၁၉ ရာစုက ထင်ရှားသည့် အိန္ဒိယလူမျိုးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ဤသို့ဆိုခဲ့၏– “အရှေ့နှင့်အနောက် အတူတကွမပူးပေါင်းဘဲနှင့် စစ်မှန်သောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် ဖြစ်တည်လာမည်မဟုတ်ပါ။” ဩစတြေးလျ၊ စထရက်ဖီးရှိ အစ္စလာမစ်ကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက သတင်းစာတစ်စောင်တွင် ဤသို့ရေးသားခဲ့၏– “မွတ်စလင်လူမျိုးအားလုံးကဲ့သို့ပင် ကျွန်မလည်း ယေရှုပြန်ကြွလာပြီး စစ်မှန်သောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် တည်ထောင်မည်ကို ယုံကြည်၏။”
ယခုအချိန်တွင် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကို မျှော်လင့်နေကြပြီး ယင်းအတွက် ဆုတောင်းနေကြသူတို့၏အရေအတွက် သန်းနှင့်ချီရှိသည်မှာ မှန်ပါသည်။ သို့သော် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ဤမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ဝေသော ကျွန်ုပ်တို့ယေဟောဝါသက်သေများသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုများ၌ လူတို့ကိုပါဝင်စေရန် သင့်ရပ်ကွက်တွင် တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သွားကြသည်ကို သင်သိပေမည်။ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလုပ်ငန်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံပေါင်း ၂၃၆ နိုင်ငံတွင် ဘာသာစကား ၄၀၀ ကျော်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသည့်အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ အမှန်တွင်၊ ဤမဂ္ဂဇင်း၏ခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံမှာ ကင်းမျှော်စင် ယေဟောဝါ၏နိုင်ငံတော်ကို ကြေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ လူတို့သည် ထိုနိုင်ငံတော်အတွက် ဆုတောင်းသည်၊ မတောင်းသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မေးလေ့ရှိသည်။ မြောက်မြားစွာသောသူတို့က ဆုတောင်းကြကြောင်း ပြောကြသည်။ သို့သော် ထိုဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်း မေးသည့်အခါ အများစုက “ကျွန်ုပ်မသိပါ” ဟုဖြေတတ်ကြသည်၊ သို့မဟုတ် သူတို့အဖြေမှာ မသေမချာဖြစ်တတ်သည်။
များစွာသောလူတို့သည် မိမိတို့မသိနားမလည်သောအရာကို အဘယ်ကြောင့် တောင်းလျှောက်ကြသနည်း။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် ရှုပ်ထွေး၍ မရှင်းမလင်းသော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်နေ၍လော။ မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထား၏။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်သော ကျမ်းစာသတင်းတရားက ပြဿနာများလှသောဤအချိန်တွင် စစ်မှန်သောမျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆောင်းပါးတွင် ထိုမျှော်လင့်ချက်အကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာရှင်းပြထားပုံကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိကြမည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်လာရန်အတွက် တောင်းလျှောက်သည့် ယေရှု၏ဆုတောင်းချက် မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြေကြားခံရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိကြလိမ့်မည်။
^ အပိုဒ်၊6ယေရှုပေးခဲ့သောစံပြဆုတောင်းချက်ကဲ့သို့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူ၏ကာဒစ်ဆုတောင်းချက်ကလည်း ဘုရားသခင့်နာမတော် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းရှိရန် တောင်းဆိုထား၏။ ကာဒစ်ဆုတောင်းချက်သည် ခရစ်တော်အချိန်လောက်ကတည်းကရှိသည် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပင်စောသည်ဟူသော အချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းအခုံတချို့ရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့မူ စံပြဆုတောင်းချက်နှင့် ဆင်တူသည့်မည်သည့်အချက်များကြောင့်မဆို မအံ့သြသင့်ချေ။ ယေရှု၏ဆုတောင်းချက်သည် အသစ်တီထွင်သော သို့မဟုတ် လုံးဝပြောင်းလဲလိုက်သောဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုစီသည် ထိုအချိန်က ဂျူးလူမျိုးအားလုံး ရရှိနိုင်သောကျမ်းစာအပေါ် လုံးဝအခြေပြုခဲ့သည်။ ယေရှုက မိမိ၏ဂျူးနောက်လိုက်များအား သူတို့တောက်လျှောက်တောင်းဆိုသင့်သည့်အရာများအတွက် တောင်းလျှောက်ရန် အားပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။